Snappy Ubuntu Core inogadziridza mufananidzo wayo weRaspberry Pi 2 | Linux Vakapindwa muropa
Snappy Ubuntu Core inogadziridza mufananidzo wayo weRaspberry Pi 2
Canonical ine tariro huru Snappy Ubuntu Core, kuzvipira kwayo kuInternet yezvinhu (IoT), uye mumazuva achangopfuura zviitiko zvevagadziri vayo zvave zvinotyisa. Nekudaro, ivo havana chete kugadzirisa bugs dzemarudzi ese uye nekuwedzera mashandiro ehunhu, asi zvakare vakagadzirisa mufananidzo weRaspberry Pi 2, pavanenge vasarudza kuti zviwanikwe kune vashandisi a bazi idzva rakavakirwa paUbuntu 15.10 Wily Werewolf, iyo inowedzera kune yatove iripo Ubuntu 15.04-based Vivid Verbet.
Asi isu tinoenda nezvikamu, kutanga zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichizoratidzwa nekukurumidza mukushandisa kunoitwa nemamirioni evashandisi eiyo Raspberry Pi 2 sechinhu chisingadhuri multifunction chishandiso, uye zvinonakidza kuona mitsva distro dzimwe nzira dzayo kubuda, kuwedzera ku Raspbian, Ubuntu Mate, OpenELEC, Pidora, Minibian kana Risc OS pakati pevamwe. Ichi chifananidzo chitsva chave kuwanikwa munzvimbo yemuchinangwa ichi paCanonical saiti, uye saizi yacho ingangoita 145 MB.
Iyo imwe itsva yekufarira ine chekuita neiyo Ubuntu 15.10 yakavakirwa mufananidzo Wily Werewolf, iyo isingafanani neiyo yakavakirwa paVivid Verbet ichave ichitenderera kuburitswa uye kwakawanda kuyedza, kune avo vanogara vachida kuve nemapakeji nyowani kunyangwe iri chirongwa chakanangana nemidziyo midiki. Asi kuvandudza kunoenderera, uye kupfuura nhau dzinogona kubva kublog ye Ubuntu Insights ikozvino iwe unogona zvakare kuona iyo yazvino mamiriro ebudiriro kubva kubhodhi iri naTrello.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Snappy Ubuntu Core inogadziridza mufananidzo wayo weRaspberry Pi 2
Ubuntu rolling kuburitswa, une chokwadi?
Shodan iyo Google yevanobiridzira
Dzidziso: Defragment yako hard drive pasi peGNU Linux